ubuntu 10.10 problem! — MYSTERY ZILLION
ubuntu 10.10 problem!
ကျွန်တော့စက်မှာ xp နဲ့ ubuntu 10.10 ကို dual boot တင်ထားပါတယ်။ အခု ubuntu ကို uninstall လုပ်ချင်လို့ပါ။ xp တင်ထားပြီးတော့မှ ubuntu ကို တင်ပြီး စမ်းသုံးကြည့်တာပါ။ xp တစ်ခု ဘဲ အရင်အတိုင်းပြန်သုံးလို့ရအောင် ubuntu ကိုဘယ်လို uninstall လုပ်ရမလဲသိချင်လို့ပါ။ ဆရာများဖြေပေးပါဦးခင်ဗျာ။
ဘာနဲ့တင်ထားတာလဲ Wubi နဲ့ဆိုရင်တော့ XP ထဲမှာပဲ Programs ထဲကနေပဲ Uninstall လုပ်လို့ရပါတယ် Wubi နဲ့မဟုတ်ရင်တော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ Thread မှာသွားဖတ်ပါ ဖြေပြီးသားရှိပါတယ်။
thank brother calmhill.
ကျွန်တော့ဆီမှာ CD ROM မပေါ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
IT_KOKOရေ လက်တော့လား ဒက်စတော့လားမသိ ။ ဒက်စတော့ဆိုရင်လည်း ဘာ CD ROM အမျိုးအစားလေးဆိုတာကိုပြောပြပေးပါ။ လက်တော့ဆိုရင်တော့ မော်ဒယ်နံပါတ်လေးတစ်ဆိတ်လောက်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ auto detect ဆိုတော့ မပေါ်တာကဖြစ်ခဲပါတယ်။ သူမော်ဒယ်နဲ့သူသီးသန့် driver တင်ချင်ကောင်းချင်ကောင်းသွားမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
Laptop ပါ Acer Aspire 4820TG...
@IT_KOKO cdrom မပေါ်ဘူးဆိုတာ Windows မှာလား Ubuntu မှာလား? Ubuntu မှာ window explorer မှာလို cd rom drive မပေါ်တာလား ဒါမှမဟုတ် cd rom drive ထဲ CD Disk ထည့်ပြီးမှ မပေါ်တာလား?